Onye ọ bụla na-efega United States kwesịrị ịnweta ule COVID-19 adịghị mma n'ime awa 24
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Onye ọ bụla na-efega United States kwesịrị ịnweta ule COVID-19 adịghị mma n'ime awa 24
Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • Akwụkwọ akụkọ USA
Iwu ntinye maka United States of America ka gbanwere ka Onye isi ala US Biden kwuputara ọkwa na netwọkụ TV nke mba. WTN na-ekwu na US anaghị aga nke ọma.
Onye isi ala US Biden taa kwupụtara na nnọkọ mgbasa ozi na-agbasa TV nke mba na onye ọ bụla na-eme njem na United States kwesịrị ịnye nnwale COVID-19 emere n'ime awa 24 nke ọpụpụ.
Nke a na-emetụta ndị ọbịa, ndị njem azụmahịa, ndị nnọchiteanya, na ndị bi na US, na ụmụ amaala US.
Iwu ọhụrụ a na-emetụta onye ọ bụla, ọbụlagodi ndị njem nwere ọgwụ mgbochi zuru oke.
A ga-achọkwa iwu mkpuchi n'ụgbọelu.
Nke a bụ nnukwu mgbanwe maka ndị njem ezumike.
The Network Njem Nleta Ụwa toro gọọmentị US maka nzọụkwụ a mana ọ na-ekwu na US anaghị aga nke ọma.
World Tourism Network (WTN) dabere na Hawaii na-akpọ maka nnwale PCR ngwa ngwa maka ụgbọ elu mba ụwa enyere na ọdụ ụgbọ elu tupu ịbanye ụgbọ elu mba ụwa. Enwere ike ịnye ule dị otú ahụ ma nweta nsonaazụ n'ime nkeji iri na ise. Nke a abụrụla ọkọlọtọ n'Izrel.
World Tourism Network na-akpọkwa ka achọrọ ule COVID-19 nke abụọ n'ime ụbọchị abụọ ka ọ bịarutere. Isi ihe nke abụọ ga-abụ ịtụ aro ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụrụ na njem na-eme n'oge oge flu na US Nke a ga-ezere mgbagwoju anya na nsonaazụ ule.
Ekwesịrị ịpụpụ ndị njem na-abụghị ndị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ruo mgbe nsonaazụ ule nke abụọ batara, dịka atụmatụ WTN siri dị.
Onye isi ala toro Gọọmenti South Africa maka ịgbalite na inye aka n'ụwa niile n'ibipụta akụkọ n'oge na-adọ aka ná ntị banyere ụdị Omicron ọhụrụ. Onye isi ala US mere ka o doo anya na South Africa ga-abụrịrị otuto, ọ bụghị ịkpọ ya.